ᐈ Lords Mobile Nri efu ❤️ 2021
Lords Mobile bụ ihe egwuregwu vidio nke IGG mepụtara ọtụtụ afọ gara aga na nke ahụ na-enwetakwu aha maka aha ya nke ịbụ a usoro egwuregwu. Egwuregwu a sara mbara nke ukwuu ma nwee ọtụtụ ihe na akụrụngwa.
Na egwuregwu ị ga-achọ ihe onwunwe ime ihe obula. Ihe ọ bụla chọrọ ego ole a kapịrị ọnụ na ịmara otu esi arụ ọrụ nke ọma ga-akwado gị.
Lords Mobile Ihe
Nke a bụ ebe ị ga-ahụ akụkụ ahụ dị egwu nke egwuregwu ahụ. Yabụ ịkwesịrị iwu ụlọ nke na-ewepụta ihe onwunwe, iji gbakọta nke ọma ma nwee ike melite ụlọ ndị a.
Nri bu otu n’ime ihe ise dịnụ nke ị ga-ahụ na Lords Mobile. Enwere ike ịnakọta site na ịchọta ha n'ime oghere dị n'ọhịa ma ọ bụ na ugbo na onye ọkpụkpọ ọ bụla na-ewuli elu ala ha.
En Lords Mobile nri Ọ dị mkpa ebe ọ bụ na site na nke a ị nwere nhọrọ iji zụọ ndị agha ma mezie ndozi.
Agbanyeghị, ọtụtụ ndị egwuregwu na - eche mgbe niile ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ha nọrọ Na-enweghị nri, ya mere site na isiokwu a anyị ga-ekwu maka ya.
Lords Mobile Comida
Kedu ihe na-eme mgbe ịnweghị nri?
Ọtụtụ ndị egwuregwu na-eche na ọ bụrụ na ha agwụchaa nri, ndị agha ha ga-anwụ, n'ihi na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, nri? Otú ọ dị, na Lords Mobile nke ahụ anaghị eme eme.
N'ezie ma ọ bụrụ na ịnọ n’enweghi nri Onweghị ihe ga-eme ndị agha gị, ị nweghị nri ị ga-azụ ndị agha a, mee nyocha ma ọ bụ melite ụfọdụ ihe. Nke ahụ bụ n'onwe ya mmetụta nke ịnweta akaụntụ gị Lords Mobile Na-enweghị nri.
Kedu ka ị ga-esi gwụchaa nri?
Ihe anyị na-ahụkarị nke nwere nsonaazụ bụ na ị na-emelite ugbo gi na otu ulo gi. I nwekwara ike ichoputa mmepụta nke nri ị nwere, n'ụzọ dị otú a ị nwere ike belata mmezi.
Kedu ihe ị ga - eme iji nweta nri?
Tozọ esi enweta nri bụ site na a ụlọ nrụpụta, ke idaha enye emi ugbo. Site na nke a ị nwere ike mepụta nri na ị nwere ike nweta nkwalite ya na ọkwa 25.
Lords Mobile Granja
Ihe ị nwere ike ime iji nwee nnukwu nri nri bụ melite ugbo, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime ya ngwa ngwa ị nwere ike iji ndokwa ngwa ngwa. Agbanyeghị, ị gharịrị iburu n'uche na mmelite ya na-aga ụkwụ na aka na ụlọ ndị ọzọ na nnukwu ụlọ.
Ugbu a na ị maara otú azacha nri, kpachara anya gị ma nọgide na-amụta ịbụ ọkachamara n’egwuregwu ahụ. Ruo oge ọzọ!
Esi gbanwee aha gị na Clash royale
Ego Clash royale